ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာတားမြစ်ထားတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့နည်းဥပဒေသများ - CantWait2Say
လက်စွပ်တွေမှာ ရှိတဲ့ မတူညီတဲ့ အဓိပ္ပါယ်များ
လက်စွပ်တွေမှာ ရှိတဲ့ မတူညီတဲ့ အဓိပ္ပါယ်များ – လက်တစ်ချောင်းစီပေါ် ဝတ်ဆင်ထားတဲ့လက်စွပ်တွေမှာ မတူတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိပါတယ်။ . ဘယ်ဖက်လက်သူကြွယ်မှာရှိတဲ့ သွေးကြောတစ်ချောင်းက နှလုံးသားနဲ့ဆက်သွယ်ထားတယ်။ ဒါကြောင့် မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါ မင်္ဂလာဇနီးမောင်နှံက လက်ထပ်လက်စွပ်ကို ဘယ်ဖက်လက်သူကြွယ်မှာ ဝတ်ဆင်ပေးကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာဖတ်ရတဲ့ လက်စွပ်ဝတ်ဆင်ပုံ အကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ – လက်စွပ်ဝတ်ဆင်တဲ့ …
လေလည်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက် ၁၃ချက်
လေလည်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက် ၁၃ချက် လူတိုင်းလေလည်ကြပါတယ်။လေလည်တာကရှက်စရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျန်းမာရေးအရလေလည်ကြရတာပါ။လေမလည်ဘူးဆိုရင်သာ ကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်စေပါတယ်။လေလည်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက် ၁၃ချက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုရင်… ၁။လေလည်တယ်ဆိုတာကဘာလဲ? လေလည်တာက ခန္ဓာကိုယ်ထဲကလေထုကိုပိတ်မိထားတဲ့အခါမှာ ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ သွေးထဲကနေစပြီးအူထဲအထိ ဂတ်စ်တွေစိမ့်ထွက်လာတာကနေ လေလည်ဖို့အစပြုနေခဲ့တာပါ။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း အူထဲမှာနေနေတဲ့ ဘတ်တီးရီးယားတွေကြောင့် ဂတ်စ်ကို ထုတ်ပေးတဲ့အနေနဲ့လေလည်တာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်လေလည်မှုတစ်ခုဟာ နိုက်ထရိုဂျင် ၅၉ရာခိုင်နှုန်း၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ၂၁ရာခိုင်နှုန်း၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် …
ကီလိုနဲ့ ဝယ်စားရင် မွဲသွားနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးအစားအစာများ
ဒါကတော့ စပိန်နိုင်ငံရဲ့ အစားအစာတခုဖြစ်ပြီး ဒါကတော့ စပိန်နိုင်ငံရဲ့ အစားအစာတခုဖြစ်ပြီး ဝက်ပေါင်ခြောက်ကို အပြားလေးတွေ လွှာပြီး မှိုင်းတိုက်ကာ ကင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသွား အစားသရဲတွေကတော့ ဒါကို ရှာဖွေစားသောက်တတ်ကြပါတယ်။တစ်ကီလိုကို 392 ဒေါ်လာနဲ့ ရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်ရဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ အစားအစာကတော့ Wagyu လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ထောပတ်စိမ်ထားတဲ့ အမဲသားကို …